ချို ပေါ့ ကျ (၆) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ချို ပေါ့ ကျ (၆)
ချို ပေါ့ ကျ (၆)
Posted by black chaw on Mar 21, 2012 in Creative Writing, Editor's Choice, Myanma News, Opinions & Discussion, Photography, Travel | 60 comments
စိတ်ကို ကိုက်မယ့် ခြင်
နှလုံးသားတေးသစ် ကြားလားဟေ့ချစ်သူ မဆုံးတဲ့တေးသွား
ကိုငှက်နဲ့ အောင်ရင်တို့ ကျားကျားခြင်းစုံတွဲဆိုခဲ့တဲ့ မဆုံးတဲ့သီချင်း ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲက စာသားအချို့ပါ ကျောင်းဒကာ။
မျက်စိနောက်နေကြမှာစိုးလို့ ဝေ့မနေတော့ပါဘူး။ အဲဒီသီချင်းကိုရေးတဲ့လူက ကိုငှက်ရဲ့ သူငယ်ချင်း ကိုကြွက်နီပါ။ အဲဒီ ကိုကြွက်နီက ကိုငှက်တို့ ကျောင်းသားဘ၀မှာ ဒရမ်မာတဲ့ နော်ဟေ့လူ ဘာမှတ်နေလဲ။ ထူးဆန်းတာက ရှားရှားပါးပါး ထူးအိမ်သင် သူငယ်ချင်းဖြစ်ပါလျက်နဲ့ ဒီသီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲ ရေးပြီး ကျေနပ်နေတတ်ခဲ့သူပါ။ နောက်တော့ စာပေလောကထဲ ခြေစုံပစ်ဝင်ပြီး ဂျာနယ်အယ်ဒီတာဘ၀၊ မဂ္ဂဇင်းစာရေးဆရာဘ၀နဲ့ အခုအချိန်ထိဖြတ်သန်းနေပါတယ်ဗျာ။ စာပေလောကထဲမှာကျတော့ သူ့ကလောင်နာမည်က သိမ်းတင်သားတဲ့။ ပုဆိုးတိုတို၊ ရှပ်အင်္ကျီလက်တို၊ ဘေးမှာလွယ်အိတ်တစ်လုံးလွယ်ပြီး မုတ်ဆိတ်မွှေးဗရဗျစ်နဲ့ မသိရင် ကိုရင်စည်သူတို့ ဆရာ မင်းသိင်္ခကြီး ပုံစံမျိုးဖမ်းထားတဲ့ လူကြီးပေါ့။ အနုပညာသမားစစ်စစ်တစ်ယောက်ကို အရှင်လတ်လတ် ပြပါဆိုရင် အဲဒီလူကြီးကို လက်ဆွဲပြီး ပြလိုက်ပေတော့ဗျို့။ ကာလတစ်ခုမှာ ကျွန်တော်နဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပေါင်းသင်းခဲ့ဘူးတာပေါ့။ အခုတော့ မတွေ့တာတောင် အတော်ကြာနေခဲ့ပြီ။ ရေးရင်းနဲ့ လွမ်းတောင်လာတယ် ကိုကြွက်နီရေ။ အော် ဘ၀ဆိုတာကလည်း ကိုခင်ဝမ်းကြီးဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းလို လမ်းတွေရဲ့ သယ်ဆောင်ရာနောက်ကို လိုက်နေကြရတာမျိုးဆိုတော့ သူလိုက်ပါစီးမျောနေတဲ့လမ်းနဲ့ ကိုယ်လိုက်ပါစီးမျောနေတဲ့လမ်းက ဆုံကြတဲ့အခါ ကြုံဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ လမ်းတွေ က မဆုံဖြစ်ကြတော့ ဘ၀ခရီးသည် ကျွန်တော်တို့တတွေလည်း မကြုံ ဖြစ်ကြဘူးပေ့ါ။ အော် ဆုံတဲ့အခါလည်း ကြုံကြတာပေါ့ ကျောင်းဒကာရာ။
ပြောချင်တာက အဲဒီ ကိုကြွက်နီ ခေါ် ဆရာသိမ်းတင်သားရဲ့ စာရေးဟန်ကို ကျွန်တော် စွဲစွဲလန်းလန်း နှစ်သက်ခဲ့ဘူး တဲ့အကြောင်းလေးပါ။ ကျွန်တော်နဲ့ အကြိုက်လာတူနေတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရွာသား ကိုလင်းဝေကြီးပါဗျာ။ သူကလည်း ဆရာသိမ်းတင်သားရဲ့ စာရေးဟန်ကို နှစ်သက်ပါသတဲ့။ ဒါကတော့ တိုက်ဆိုင်လို့ ကြော်ငြာဝင်လိုက်တဲ့သဘောပါ။ အရင်က ကိုငြိမ်းအေး တို့ခေတ် မော်ဒန်သရဖူနဲ့ ဆရာမ သွန်းနှင်းအိမ်တို့ ၊ ဆရာမသင်းသင်းသာတို့ခေတ် မဟေသီမဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ဆရာသိမ်းတင်သားက ပင်တိုင်ရေးခဲ့ဘူးပါတယ်။
အခု ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ ချို ပေါ့ ကျ ရေးဟန်တွေက ကိုသိမ်းတင်သားရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကိုခံထားရတယ် ဆိုတာလေးလည်း ၀န်ခံထားချင်ပါတယ်။ မတော် ခိုးချပါတယ်လို့ လာစွတ်စွဲနေမှ စာသူခိုးဖြစ်နေမှာစိုးလို့ ကြိုကာထားရ တာပါဗျာ။ ယုတ်စွအဆုံး။ ကျွန်တော် စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးနေတဲ့ ကျောင်းဒကာ ဆိုတာတောင် ကိုသိမ်းတင်သားရဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထွင်ပြီး သုံးခဲ့ဘူးပါတယ်။ မကုလားမလို့။ အဲဒီမကုလားမလို့ သုံးလိုက်တဲ့ ပို့စ်ကစပြီး ပေါက်ဖေါ်က ကွန်းမန့်ပေးတိုင်း ကျွန်တော့်ကို မကုလားမရေ လို့ခေါ်ခေါ်နေတတ်လို့ နောက်ပိုင်း မကုလားမ ကို မသုံးရဲတော့ဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းဒကာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလောက် စီးစီးပိုင်ပိုင် မရှိတာကြောင့် ကျောင်းဒကာလို့ပဲ သုံးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ကဲကြည့် စကားတွေက လျှောက်ဝေ့နေပြီ။
အဲဒီ ဆရာသိမ်းတင်သားက ကျွန်တော်အခုအထိစိတ်ထဲစွဲနေအောင် ရေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာလေး တစ်ခု ရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ အတိအကျတော့ မမှတ်မိတော့ဘူးဗျာ။ ခြင် အကြောင်းလေးပါ။ ကိုသိမ်းတင်သားရေးတဲ့ ခြင် နဲ့တော့ တူမှာမဟုတ်ပေမယ့် သည်းခံဖတ်ပေးဗျာ။ အဲဒီ ခြင်အကြောင်းလေး ဘလက်ချော ဗားရှင်းအနေနဲ့ အခုစရေးတော့မယ်။ ဘာ… အခုမှ စမယ် ဟုတ်စ လို့တော့ ဒေါမပွပါနဲ့ ကျောင်းဒကာ။ အင်ထရိုဒတ်ရှင်းဆိုတဲ့ နိဒါဏ်းချီတယ်ဆိုတာကလည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားလည်း အသိသားနဲ့။ ကဲပါဗျာ အခု အင်ထရိုဒတ်ရှင်း ပြီးပါပြီ။
အခုတလော ခြင်တွေ တအားပေါနေပါတယ် ကျောင်းဒကာ။ ခြင်သိတ်အကိုက်မခံနဲ့ဗျ။ ရောဂါရမယ်။ လွယ်ပါတယ်ဗျာ။ ဂေါ်ဇီလာ၊ ကင်းကောင်၊ ဂျမ်ဘို ခင်ဗျားကြိုက်ရာသုံးစမ်းပါ။ ခြင်ဆေးခွေတွေကလည်း ပေါမှပေါ။ ခြင်ဆိုတာကို ပြတိုက်မှာ သွားကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ ခြင်ဆေးခွေတောင် ရှိသေး ဟေးဟေး။ ကောင်းပါပြီ။ ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုက်တဲ့ခြင်တွေကို ခြင်ဆေးခွေထွန်းပြီး ကာကွယ်ထားလို့ရပေမယ့် စိတ်ကိုကိုက်မယ့်ခြင် တွေကို ဘာနဲ့ကာကွယ်ကြမလဲဗျာ။ ခြင်ထောင်ကောင်းကောင်းဝယ်ပြီး ၀င်ထိုင်နေမှ လွတ်မယ့်အပေါက်မျိုးဗျ ကျောင်းဒကာရ။ ဒီအတိုင်းဆို ခြင်ထောင်တွေတော့ ဈေးတက်ဦးမှာ မြင်ယောင်သေး။ ကိုပါလေရာကြီးရေ၊ သိမ်ကြီးဈေးမှာ ရှိသမျှ ခြင်ထောင်တွေ အကုန်သာသိမ်းကြုံးဝယ်ထားလိုက်ဗျာ။ ဗီးရှင်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ အဲဒါကိုပြောတာနေမှာ။
ဘယ်လောက်ပဲ သတိထားထား လွတ်တာနဲ့ ၀င်ကိုက်မယ့် ခြင်တွေက အများသား။
တစ်ခါတစ်ခါများ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ခြင်တစ်ကောင်ပြန်ဖြစ်နေတတ်ပြန်တယ်ဗျာ။ ကိုယ့် အပြုအမူ အပြောအဆိုလေးတစ်ခုက တစ်ခြားတစ်ယောက်စိတ်မှာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားခဲ့ရင် ကိုယ်ကလည်း စိတ်ကို ကိုက်တဲ့ ခြင်တစ်ကောင်ဖြစ်သွားပြန်ရော။ သတိထားပါကျောင်းဒကာ။ ကိုယ်က ခြင်တစ်ကောင်ပြန်ဖြစ်သွားရင် ဂေါ်ဇီလာနဲ့တူတဲ့ ခြင်ဆေးတွေနဲ့ မတွေ့အောင်ရှောင်ပေါ့ဗျာ။ ကင်းကောင်တို့ ဂျမ်ဘိုတို့ကိုလည်း သတိထားဦးဗျ။ ကိုယ်က ကိုက်ရတာ အမြတ်ပဲဆိုပြီး မျက်စိစုံမှိတ် လိုက်ကိုက်နေရင်တော့ သေချာတယ်။ မကြာခင် ခြင်ဆေးခွေနဲ့ နှိမ်နင်းသလို နှိမ်နင်း ခံရတော့မယ်ဆိုတာလေးလည်း ထည့် တွေးထားပေါ့။ သတိလေးနဲ့ ကိုက်ဗျ။
ခင်ဗျား စိတ်ကိုကိုက်မယ့် ခြင်တွေရန်က ကာကွယ်ပါ။ မတော် စိတ်ငှက်ဖျားဖြစ်နေမှ စိတ်ဒေါက်တာတွေဆီသွားနေရရင် စိတ်ပိုက်ဆံတွေ ကုန်နေမှာစိုးလို့ပြောတာပါ။
အကောင်းဆုံးကတော့ ခြင်ထောင်ကောင်းကောင်းတစ်လုံးဝယ်ထောင်ပြီး ၀င်ထိုင်နေဗျာ။ အေးရာအေးကြောင်းပေါ့။
ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်လည်း ခြင်တစ်ကောင်မဖြစ်အောင်နေပါ။ တကယ်လို့ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်က ခြင်တစ်ကောင်ဖြစ်နေခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ …။ ဟေးဟေး…။
ကဲ ရွာစားရေ။ ခြင်ထောင်ထဲကို အရောက်ပို့ဗျာ…။
ဇာတ်မင်းသားလေး စွမ်းဇာနည် အတိုင်ခံရပြီ (First Music News)
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဇာတ်ကန်ထရိုက်ဦးဝင်းဦး က ဇာတ်မင်းသားလေးစွမ်းဇာနည်ကို မကျေနပ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံး(ဗဟို) ကို တိုင်စာပို့လိုက်ပါသတဲ့ ။ ဖြစ်စဉ်လေးက ဒီလိုတဲ့ဗျာ။ မြောင်းမြမြို့နယ် သမိုင်းဝင်ကျိုက်မောင်းပွဲတော်ကြီးမှာ ကပြဖို့အတွက် ဇာတ်မင်းသားလေးစွမ်းဇာနည်ကို တစ်ည ကျပ်သိန်းလေးဆယ်နှုန်းနဲ့ သုံးညစာ သိန်း ၁၂၀ နဲ့ ဦးဝင်းဦးက ကန်ထရိုက်ဆွဲပါသတဲ့။ နည်းတဲ့ပိုက်ဆံတွေလားဗျာ။ အေးလေ သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ် အားပေးတဲ့လူတွေရှိလို့လည်း ငှားရဲတာနေမှာပေါ့။ ဦးဝင်းဦးရဲ့စကားတစ်ချို့ကို ဖတ်ကြည့်ပါဗျာ။
“ဒီနေရာမှာ ဖြတ်ပြောချင်တာက အဲဒီသမိုင်းဝင် ကျိုက်မောင်းဘုရားပွဲတော်ရုံနဲ့ မြောင်းမြမြို့ဟာ ၁၀ မိုင်ကျော်ဝေးပါတယ်။ မင်းသားက ဇာတ်ရုံမှာ မအိပ်နိုင်ဘူး။ မြောင်းမြမြို့ပေါ်က ဟိုတယ်မှာပဲ အိပ်မယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့လိုက်လျောခဲ့ပါတယ်။ စကပြမယ့်ညမှာ နယ်မြို့ဆိုတော့ ကားအကောင်းစားလည်းသိတ်မရှိဘူး။ လိုက်ထရပ်နဲ့သွားကြိုတော့ ဒီကားမစီးနိုင်ဘူး။ မှန်လုံကားနဲ့လာခေါ်မှလိုက်မယ်ဆိုလို့ မှန်လုံကားကိုရှာငှားပြီး မင်းသားစိတ်တိုင်းကျအောင် ကျွန်တော်တို့လိုက်လျောခဲ့ပါတယ်။ ၃ ညအတွက် သိန်း ၁၂၀ ကို ဒုတိယမြောက် ည ကမယ့်နေ့မှာ အကြေတောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း အကြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးည ကမယ့်အချိန်မှာ စတိတ်ရှိုးထွက်ပြီး သီချင်းငါးပုဒ်ပဲဆိုတယ်။ ဘယ်သူ့မှလည်း အကြောင်းမကြားဘဲ နဲ့ ပြန်သွားတယ်။ ပရိသတ်ကတော့ စွမ်းဇာနည်ထွက်နိုးထွက်နိုးနဲ့ နောက်ဆုံး စွမ်းဇာနည်ထွက်နိုးထွက်နိုးနဲ့ နောက်ဆုံး စွမ်းဇာနည်ပြန်သွားပြီလည်းဆိုရော ပရိသတ်တွေက အကြီးအကျယ် ပြသနာရှာပြီး ထပြန်ကုန်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကန်ထရိုက်တွေဆိုတာ ပရိသတ်ကို ဥပေက္ခာပြုကျောခိုင်းခဲ့တဲ့ စွမ်းဇာနည်ရဲ့ အဲဒီလုပ်ရပ်ကို အကြီးအကျယ်ဖြေရှင်းခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ၃ ညစလုံးမှာလည်း စတိတ်ရှိုးသီချင်းငါးပုဒ်ဆိုတယ်။ နှစ်ပါးကတာနှစ်ညပဲရှိတယ်။ ပြဇာတ်၊ အော်ပရာ လုံးဝမကဘူး။ ငွေအကြေချေပြီးလို့ နောက်ဆုံးညမှာတော့ သီချင်းပဲဆိုပြပြီး သူ့သဘောနဲ့သူပြန်သွားတယ်။ ဒီအတွက် တောသူတောင်သားပရိသတ်တွေက မရှိမဲ့ရှိမဲ့ စုဆောင်းပြီး ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တာကို စော်ကားလိုက်တာ ကျွန်တော်တို့ ကန်ထရိုက်တွေကို စော်ကားလိုက်တဲ့လုပ်ရပ်လို့ ကျွန်တော် ဒီလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ ငွေကြေးထိခိုက်ဆုံးရှုံးတာက ပြန်ရှာလို့ရပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ဇာတ်ပွဲကန်ထရိုက်တစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ အလုပ်ကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ စွမ်းဇာနည်ရဲ့ အခုလို လုပ်ရပ်မျိုးကိုတော့ ကျွန်တော် လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ရန်ကုန်တက်လာပြီး သဘင်အစည်းအရုံးက သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးဖို့ တိုင်ကြားခဲ့တာပါ။”
သီချင်းငါးပုဒ်ပဲဆိုပြီး သိန်းလေးဆယ်ယူသွားတယ်ဆိုတော့ စွမ်းဇာနည်ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုခက လေးဖြူထက်တောင် ဈေးကြီးနေပါရောလား။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ရှစ်သိန်း…။ အော် အောင်မြင်လာရင် အောက်ခြေလွတ်ပြီး အချိန်မတန်ခင် ကျဆုံးသွားကြတဲ့ အနုပညာသမားတစ်ချို့ကို သင်ခန်းစာယူတတ်မှ အောင်မြင်မှုကို ကြာရှည်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုတာလေး မျိုးဆက်သစ်အနုပညာရှင်လေးတွေ နားလည်သင့်ပါတယ်ဗျာ။ အခု သတင်းလေး ကတော့ ကန်ထရိုက်က တိုင်ထားတာလေးနဲ့ သူ့ဘက်က ပြောချင်တာလေးတွေကို ပြောထားတာဆိုတော့ ဇာတ်မင်းသားလေး စွမ်းဇာနည်ဘက်က ဘာပြန်ပြောမလဲဆိုတာလေး စောင့်ကြည့်ကြရအောင်ပါဗျာ။
ဂျူး ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နေ့စွဲများ (First Music News)
ဂျူး ဆိုတဲ့ နာမည်တွေ့လိုက်တာနဲ့ အမှတ်တရ ရေးခဲ့တဲ့ ဆရာမ ဂျူးကို သတိရသွားမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်ရိပ်မိပါတယ်။ အခု ကျွန်တော် ပြောပြမယ့် ဂျူးကတော့ အဆိုရှင်ကောင်မလေး ဂျူးရဲ့ စီးရီးမိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ ကလေးမလေးကိုယ်စား ဆရာမ ဂျူးကိုတောင် မျက်နှာပူနေမိပါတယ်။ နာမည် ဒီလောက်ရှားသလား သမီးလေးရေ။ ပြောမယ့်သာပြောရတာ ဒီကလေးမလေးကလည်း ခေသူတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ ဂျေမီနဲ့တွဲဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတောင် ကျွန်တော် ကြိတ်ခိုက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
မင်းနဲ့ငါ တွေ့ဆုံချိန်မှာ ဂရုစိုက်ပေါ့ နင်ငါ့ကို
ရင်ခွင်ထဲ အကြင်နာတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးချင်တယ်ဟေး
ဘာမှမသိတော့ဘူး ငါ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ မင်းပဲရှိလို့…….
ဂန္တ၀င်အချစ် ဆိုတဲ့ ဟစ်ပ်ဟော့ပ် သီချင်းလေးပါ ကျောင်းဒကာ။ အနေမတတ် အထိုင်မတတ်တဲ့ ဘလက်ချောက ရောက်နေတဲ့ အသက်အရွယ်ကိုမှ အားမနာ(ရင့်ကျက်မှုနည်းတာလည်းပါမှာပါဗျာ)၊ အဲဒီသီချင်းကို လွှတ်ကြိုက်ခဲ့ဘူးတာပေါ့။
သီချင်းတစ်ပုဒ်လောက်ပေါက်ရင် လူဖြစ်တဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ အဲဒီ ဂျူး ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက စီးရီးတစ်ခွေထွက်ပါတယ်တဲ့။ အခွေနာမည်က နေ့စွဲများတဲ့။ တေးရေးတွေက မင်းချစ်သူ၊ စိုးလင်း၊ Rခိုင်၊ ရဲလေး၊ စံပီး၊ ယုန်လေး၊ သိန်းလင်းစိုး၊ သားကြီး၊ အာကာတို့ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ကဲ ဂျူးရဲ့ နေ့စွဲများကို နားထောင်ကြည့်ကြပါစို့…။ မူရင်းကိုဝယ်ပါ ကျောင်းဒကာ၊ မူရင်းကိုသာ အားပေးပါဗျာ။
ချောရတနာ ရဲ့ Facebook ပေါ်က ဓါတ်ပုံ ကိစ္စ (The First)
မေးတဲ့လူက မေးပြီး ဖြေတဲ့လူက ဖြေပါတယ် ကျောင်းဒကာ။ နည်းနည်း ဖတ်ကြည့်ဗျာ။
မကြာခဏ နယ်ကိုသီချင်းသွားဆိုရတော့ နယ်ပရိသတ်နဲ့ ဆက်ဆံရေး သူတို့ဆီက ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံရလဲ။
ချောက ဖားကန့်ဘက်သွားတာ ဒါနဲ့ဆို (၃) ခေါက်ရှိသွားပြီ။ အဲဒီကလူတွေကလေ အရမ်းကိုခင်ဖို့ကောင်းတယ်။ တချို့ကျောက်သမားတွေဆို သူတို့ လူစိမ်းကိုရှိန်ပေမယ့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ မင်းသမီးတွေဆို ဘာပဲဆိုဆို အားပေးတာပဲ။ သရုပ်ဆောင်တွေဆိုပြီးရောပဲ။
တော်တော် ခင်စရာကောင်းတဲ့လူတွေပါ ကျောင်းဒကာ။ မင်းသမီးတွေသာဖြစ်ပါစေ၊ ဘာပဲဆိုဆို အားပေးတာပဲတဲ့။ သရုပ်ဆောင်တွေဆိုပြီးရောတဲ့။ အနုပညာကို တော်တော် ခံစားတတ်မယ့်လူတွေဗျ ဟေးဟေး။ ဖလန်းဖလန်းဆိုရင် လာထားဆိုတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့။ အေးလေ ဒါကြောင့်လည်း ခင်စရာကောင်းတာနေမှာပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား။
မေးတဲ့လူက အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းမြားတစ်စင်းကို ပစ်လွှတ်ပြန်ပါတယ် ကျောင်းဒကာ။ ခဏလေး ဖတ်ကြည့်ပေးပါ။
တလောကဆို Facebook ပေါ်က ဓါတ်ပုံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဦးဇော်ဇော်ကလည်း ဂျာနယ်တွေပေါ်မှာ ဖြေရှင်းထားတာ တွေ့ရတယ်။ ချောတို့ အနုပညာသမားတွေဘက်ကရော ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ချောရတနာလေးရဲ့ အဖြေက ဒီလိုပါဗျာ။
ချောတို့ကို အဲဒီတုန်းက မှတ်မှတ်ရရ ဒိုင်းဆုရလို့ဆိုပြီးဖိတ်လို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သွားကြတာ။ ချောတို့အရမ်းတောင် ပင်ပန်းတယ်။ အဲဒီရက်ကိုလိုက်ရတာလေ။ ဒါပေမယ့် ဒင်နာပွဲမှာ လူအများကြီး ရှိတယ်။ အဲဒီမှာဖျော်ဖြေတာ။ လူနည်းနည်းလေးနဲ့ ဖျော်ဖြေတာမဟုတ်ဘူး။ Pool Side မှာ ဖျော်ဖြေခဲ့တာ။ အစ်မတို့ကတော့ ကိုယ့်အနေနဲ့ မဖြေရှင်းတော့ဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်တယ်။ ဖြေရှင်းဖို့လည်း မလိုပါဘူး။ ဒါတွေက အနုပညာသမားဆိုရင် မကောင်းပြောတဲ့သူကလည်း မကောင်းပြောဖို့စောင့်ကြည့်နေတာပဲလေ။ ကိုယ်က အနုပညာသမားဆိုတော့ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပဲလို့ တွေးလိုက်တယ်။ အဲဒါကြီးကို ခေါင်းထဲထည့်မနေတော့ဘူး။ ဦးဇော် တို့ဆိုလည်း စိတ်မကောင်းကြဘူး။ သူတို့က မိသားစုရှိတော့လေ။ ဒါပေမယ့် ဦးဇော်ရဲ့ အမျိုးသမီးရော၊ ဆရာစိုင်း အမျိုးသမီးရော သူတို့က နားလည်ပြီးသားပါ။ သူတို့တွေလည်း အကုန်ပါတယ်လေ။
အစ်မကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့ ပြောရရင် ဒါက အခုလို ပြောခံရတာ ကိုယ့်ရဲ့ အကုသိုလ်ပဲလို့ သဘောထားတယ်။ အခုလို ပြောတဲ့သူတွေလည်း တစ်ချိန်ကျရင် အစ်မတို့လိုပဲ ပြန်ပြီးခံစားရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ အဲဒီတော့ထပ်ပြီး အကုသိုလ် မယူတော့ပါဘူး။
ကဲ Facebook ပေါ်က ဦးဇော်ဇော် တို့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရဲတဲ့လူရှိရင် ပြောကြစမ်းဘာ။ ၀ဋ်လည်မယ် ဘာမှတ်နေလဲ..။ အနေအထိုင်ဆင်ခြင်ကြပါစို့ ကျောင်းဒကာနဲ့ ကျောင်းအစ်မတို့ရေ။ မတော် Facebook ပေါ်က နိုဇိုမိနှင့် သူ၏ အသည်းလေးများဆိုတဲ့ ပုံမျိုးတွေ တက်မလာဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲနော့။ နိုဇိုမိကြီးကလည်း နေတာထိုင်တာ ဆင်ခြင်ပါဗျာ။
အနုပညာလောကကို ခေါင်းလောင်းတီးပြီး ၀င်လာတဲ့ ကျော်ဟိန်းတပည့် ဒေ၀ီဆူးခက် (အလင်းတန်း)
ရွာတော်ရှင်ဘွားဆူးနဲ့ အမျိုးများတော်နေသလား မဆိုနိုင်ပေဘူးပေါ့ ကျောင်းဒကာ။ နာမည်လေးက ဒေ၀ီဆူးခက်တဲ့။
အရုဏ်သစ် ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို ထုတ်လုပ်ရေးကို တည်ထောင်ပြီး အဓိက သရုပ်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ အဆင့်မြင့် ဒီဗီဒီ ဇာတ်ကားသုံးကား ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးသွားမယ့် သရုပ်ဆောင်သစ် ဒေ၀ီဆူးခက် ရဲ့ ဇာတ်ကားများ ကန်တော့ပွဲပေး အခမ်းအနားကို မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီက ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ် မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်တဲ့။ သရုပ်ဆောင်သစ် ဒေ၀ီဆူးခက်က ကန်တော့ပွဲပေးအခမ်းအနားခန်းမထဲကို ခေါင်းလောင်းတီး ၀င်ရောက်လာပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ မိတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ကျွန်မနာမည် ဒေ၀ီဆူးခက်ပါ။ အခုကန်တော့ပွဲပေးမယ့် သုံးကားစလုံးမှာ အဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ဒီသုံးကားစလုံးရဲ့ ပရိုဂျူဆာကလည်း ကျွန်မပါပဲ။ ဘာလို့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် ထုတ်ရိုက်ရတာလဲ ဆိုတာ့ ကျွန်မရဲ့ ပုံစံကို အပြင်ပန်းကနေကြည့်ရင် မင်းသမီးတစ်ယောက်လို့ မြင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ မိဘတွေဆီက မျက်ရည်ခံထိုးအသနားခံတောင်းပြီးတော့မှ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ထုတ်ရိုက်ရတာပါ။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကြွရောက်လာတဲ့ လူကြီးမင်းများအားလုံးက မိဘရဲ့ပိုက်ဆံကို ဖြုန်းတော့မယ့်ကောင်မလေးလို့ မြင်နေကြမလား မသိဘူးပေါ့နော်။ အဲဒီရည်ရွယ်ချက် ကျွန်မဆီမှာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ မိဘပိုက်ဆံကို ဖြုန်းဖို့အတွက် ဒီလိုပွဲကိုလုပ်တာ၊ ဇာတ်ကားတွေကို ထုတ်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်က သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တာ။ ဘယ်လောက်အထိဖြစ်ချင်သလဲဆိုရင် ကျွန်မ ၂ နှစ်လောက် ပရိုဂရမ်မာအဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ ကျွန်မအတွက် ငရဲကျနေတဲ့ ကာလပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ၊ ကိုယ်ဝါသနာမပါတဲ့အလုပ်ကို လုပ်နေရလို့ ပါပဲ။
အော် ပရိုဂရမ်မာ ၂ နှစ်လောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့။ ငရဲကျနေသလိုပဲတဲ့။ နှမြောထှာ။ ဂီဂီ လေးတို့လို မြေတောင်မြှောက်ပေးမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေနဲ့ ကြုံခွင့်မရခဲ့လို့ မပျော်ခဲ့တာဖြစ်မယ်ဗျ ကျောင်းဒကာ။ အခုတော့ ပရိုဂရမ်မာလောကအတွက် ပရိုဂရမ်မာကောင်းတစ်ယောက်တော့ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီပေါ့ဗျာ။
ကျော်ဟိန်းရဲ့ အိုက်တင်မျိုး၊ ကျော်ဟိန်းရဲ့ လမ်းစဉ်မျိုး လိုက်မှာမဟုတ်ဘဲ သူ့ရဲ့ တပည့်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျော်ဟိန်းစိတ်မျိုးနဲ့ သရုပ်ဆောင်လောကထဲမှာ ရပ်တည်သွားမယ်။
အော် ကျော်ဟိန်း ကျော်ဟိန်း၊ သရုပ်ဆောင်လောကမှာမရှိတော့တာတောင် ကျော်ဟိန်းတပည့်လို့ အော်ပြီးဝင်လာတဲ့ တပည့်လေးတွေရှိနေသေးဗျာ။ ကဲ ဒေ၀ီဆူးခက် တစ်ယောက် အကယ်ဒမီ တွေအကြိမ်ကြိမ်ရပြီး အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အဲ..အဲ…။ ကျော်ဟိန်းကြီးလိုတော့ သာသနာ့ဘောင်ဝင်မသွားနဲ့ ပေါ့ ဒေ၀ီဆူးခက်ရယ်။
ရဲလေး ရဲ့ ရူးသွပ်ခြင်းပင်လယ် (အလင်းတန်း)
အဆိုတော် ရဲလေးရဲ့ ဘိုင်အိုဂရပ်ဖီ စာအုပ် ဖြစ်တဲ့ ရူးသွပ်ခြင်း… ပင်လယ် ကို မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ရူးသွပ်ခြင်း…ပင်လယ်ကို ရဲလေးက ၂ နှစ်ကျော် အချိန်ယူ ပြင်ဆင်ပေးထားပြီး ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ ရဲလေးရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း၊ ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတဲ့ ကဗျာများ၊ အနုပညာအလှမှတ်တမ်းမျိုးစုံ၊ ခရီးသွားမှတ်တမ်း၊ သူငယ်ချင်းများနဲ့ အမှတ်တရဓါတ်ပုံ၊ ရဲလေးသီဆိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရှိုးပွဲများမှ အမှတ်တရပုံများ၊ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အလှဓါတ်ပုံများ၊ တေးစီးရီးပရိုမိုးရှင်းများမှာ ရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်းပုံများ၊ နှင်းဆီအဖွဲ့သားများနဲ့ လူရွှင်တော်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံများကို ကဏ္ဍတစ်ခုစီထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ စာမျက်နှာ ၂၁၂ မျက်နှာပါဝင်ပြီး စက္ကူအဖြူချောနဲ့ ရိုက်နှိပ်ပေးထားပါတယ်တဲ့။ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး တစ်အုပ်ကို ၇၅၀၀ ကျပ်နှုန်းနဲ့ ရောင်းချပေးသွားမှာပါတဲ့။ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေလည်း ရန်ကုန်ရော မန္တလေးမှာပါ လုပ်ပေးဦးမှာပါတဲ့ ခင်ဗျာ။ ကဲ ရဲလေး ပရိသတ်တွေ ၀ယ်ဖတ်ဖို့သာ ပြင်ထားကြပေတော့ဗျို့…။
The Lady အပေါ် ဖြူဖြူကျော်သိန်း ရဲ့ အမြင် (အလင်းတန်း)
ကျွန်တော် ဖတ်မိလေ့လာမိသလောက်တော့ The Lady ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအပေါ် ကြည့်ပြီးသူတွေရဲ့ အမြင်က နည်းနည်းမတူညီကြပါဘူး။ အခု အဆိုတော် ဒေါက်တာဖြူဖြူကျော်သိန်း က The Lady ကိုကြည့်ပြီး ဒီလိုသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
The Lady က ဖြူဖြူ့ရဲ့ စိတ်နှလုံးကို တို့ထိ ရိုက်ခတ်နိုင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပါ။ လူမျိုးခြားဒါရိုက်တာနဲ့ လူမျိုးခြားမင်းသမီးက ရသမျှသတင်းအချက်အလက် နည်းနည်းလေးနဲ့ ရသမြောက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားအဖြစ် ရိုက်ပြသွားနိုင်တာကို ဖြူဖြူ အရမ်းချီးကျူးပါတယ်။ သမိုင်းအချက်အလက်တချို့မှားယွင်းနေတယ်လို့ ပြောကြပေမယ့် တကယ်တမ်းခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်သူတွေ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက် ခါးစည်းခံခဲ့ရတဲ့ မွန်းကျပ်မှုတွေ၊ ဝေဒနာတွေ၊ ဖိနှိပ်ခံရမှုတွေကို ပေါ်လွင်အောင် ပြနိုင်တဲ့ ပြကွက်တွေလောက် အရေးမပါပါဘူး။ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခဲ့ရမှုတွေကို နက်နဲ သိမ်မွေ့စွာ သရုပ်ဆောင်ပြသွားနိုင်တဲ့ လူမျိုးခြားမင်းသမီး Michelle Yeoh ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေလောက်လည်း အရေးမပါပါဘူး။ The Lady ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားက ကမ္ဘာ့တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာ ဒီလောက်ထိ မွန်းကျပ်နေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု တကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသားတွေ သိအောင်ပြသနိုင်ခဲ့တယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ သိမ်မွေ့နက်နဲ တည်ကြည်တဲ့ သဏ္ဍာန်ပေါက်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လူမျိုးခြားမင်းသမီးကိုလည်း ဖြူဖြူအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ ဖြူဖြူ့ကို ရှိုက်ငင်ရလောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်တယ်။ အားနည်းချက်တချို့ရှိနေတယ် ဆိုပေမယ့် အမှောင်ထဲကနေ ဘယ်လောက်ထိ အစရှာလို့ ရမှာတဲ့လဲ။ ရသမျှ သတင်းအချက်အလက်လေးနဲ့ ရသအမြောက်ဆုံးဖြစ်အောင် ရိုက်ပြကြရတာလေ။ အဲဒါကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ သမိုင်း အချက်အလက်လည်း မှန်ပြီး ရသမြောက်တဲ့ ပြည်တွင်းဖြစ် The Lady ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမျိုးရိုက်နိုင်ပါစေလို့ ဖြူဖြူဆုတောင်းပါတယ်။ The Lady ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတချို့က မျက်ရည်ကျစေတဲ့အထိ ညှို့ငင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်
လို့ ဆရာဝန်အဆိုတော် ဒေါက်တာဖြူဖြူကျော်သိန်းက သုံးသပ်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
NLD ပါတီဝင် ထားတဲ့ လင်းလင်း (ပေါ်ပြူလာ)
ဒီသတင်းကတော့ လင်းလင်းကို ကြိုက်တဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ ဖတ်ဖို့ ရေးပေးလိုက်တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ရွာသူမယ်ပုခ်ျတစ်ယောက်ကတော့ လင်းလင်းရဲ့ စတိတ်ရှိုးကို သွားကြည့်ပြီး ပို့စ်ကြီးတစ်ပုဒ်တောင် ပွင့်အံထွက်လာခဲ့ဘူးတာ မှတ်မိနေပါတယ်ဗျာ။ အဲဒီ အဆိုတော် လင်းလင်း က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မန္တလေး စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်မှာ တောက်လျှောက်လိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သူ့အတွေ့အကြုံကို ဒီလိုပြောထားပါတယ်ဗျာ။
ခရီးစဉ်တောက်လျှောက် ရောက်တဲ့မြို့၊ ရောက်တဲ့နေရာမှာ တွေ့ရတဲ့ ပြည်သူလူထုအကုန်လုံးရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ သူတို့လိုချင်တဲ့အရာ၊ တောင့်တတဲ့အရာက တစ်ခုတည်းပဲ ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်မိတယ်
လင်းလင်းက သူတို့လိုက်ပါလာတဲ့ ယဉ်တန်းခဲနဲ့ ပစ်ပေါက်ခြင်းခံခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုပြောထားပါသေးတယ်။
အဲဒါက တကယ်ဖြစ်တာ။ ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ ကားကိုမှန်တာ။ ကျွန်တော်လည်းထိသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းပါ။ ခေါင်းကိုမှန်ကွဲစနည်းနည်းမှန်သွားရုံပါ။ လူကြီးတွေကိုတော့ ဒီကိစ္စတွေ အကုန်လုံးပြောပြထားပါတယ်။
NLD ပါတီထဲ ၀င်ထားပြီး ပါတီအတွက် သီချင်းတွေ ရေးစပ်ဖြစ်လားဆိုတဲ့ အမေး ကို ဒီလိုဖြေထားပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ NLD ထဲလည်း ၀င်ထားတယ်။ အမေစုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကူညီနိုင်သမျှတော့ အချိန်မရွေး လိုက်ကူညီပေးတယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် အဓိကကတော့ နိုင်ငံကောင်းဖို့နဲ့ နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကိုယ့်ညီအစ်ကို မောင်နှမ ပြည်သူလူထုအားလုံး ကောင်းဖို့ပဲ ခေါင်းထဲမှာရှိတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲ ရေးမှာပါ။ ပါတီတစ်ခုတည်းအတွက် ဦးစားပေးပြီး တသီးတသန့်ကြီးတော့ မရေးဖြစ်ပါဘူး။ အားလုံးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း နိုင်ငံကြီးကောင်းစားဖို့ပဲလေ။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးပြု သီချင်းမျိုးတွေပဲ ရေးဖြစ်မှာပါ
ကဲ လင်းလင်း ပရိသတ်တွေ ကျေနပ်နေကြမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။
မီးမီးခဲ ပေးတဲ့ Missed Call (ပေါ်ပြူလာ)
စောဘွဲမှူးသမီး၊ ကဗျာဘွဲ့မှူးညီမ၊ ထူးအယ်လင်းကတော် မီးမီးခဲ ရဲ့ ၅ ခွေမြောက် တစ်ကိုယ်တော်စီးရီးဖြစ်တဲ့
Missed Called အခွေကို မတ်လ ၁၇ ရက်က စဖြန့်ချိလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။ သီချင်းအားလုံး ၁၃ ပုဒ်ပါဝင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရေးသီချင်းတစ်ပုဒ်လည်း ပါဝင်ပါသတဲ့ဗျာ။ ကဲ မူရင်းခွေလေးတွေ ၀ယ်ပြီး အားပေးကြရအောင် ကျောင်းဒကာ။
ကလေးသူငယ်များကို နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင် တောင်းရမ်းခိုင်းသူကို ကျောက်တံတားရဲမှ ဖေါ်ထုတ်ပြီ (ပေါ်ပြူလာ)
မတ်လ ၂ရက်၊ ည ခုနှစ်နာရီခွဲအချိန် ကျောက်တံတားရဲစခန်းတွင် တာဝန်မှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဒုရဲအုပ်အောင်ကျော်သူ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် နယ်မြေအတွင်း ကလေးသူငယ်ဗန်းပြ၍ တောင်းရမ်းစားသောက်သူ ဖိုးကုလားအားဖမ်းမိ၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ ၄င်းကလေးအားနောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်တောင်းရမ်းခိုင်းသူ အမှတ် ၁၀၊ နယ်မြေမီးရထားဝန်ထမ်းလိုင်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်နေသူ ထွန်းထွန်းဝင်း(ခ)ထွန်းထွန်း (၃၁) နှစ် အဖ-ဦးခင်မောင်လွင်အား ထိုနေရာအနီး လမ်းလယ်ကျွန်းတွင်တွေ့ရှိ၍ ရဲစခန်းသို့ခေါ်ဆောင်ပြီး စစ်ဆေးမေးမြန်းရာ အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်များအား နောက်ကွယ်မှကြိုးကိုင်တောင်းရမ်းခိုင်းသူဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်၍ အမှုစစ် ရဲအုပ် ဇော်နိုင်အောင်မှ ကလေးသူငယ်အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဂ) ဖြင့် ဖြစ်စဉ် ၂/ ၂၀၁၂ အရ တရားစွဲဆိုထားကြောင်းသိရသည်။
ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူရမယ့် ကိစ္စပါခင်ဗျာ။ လက်ခုတ်တီးပြီးအားပေးပါတယ်။
ယောက်ျားမိန်းမ ခွဲခြားတာထက် လူသားတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ပဲ မြင်တာပိုကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗို (ပေါ်ပြူလာ)
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုနဲ့ အင်တာဗျူထဲက အမေးအဖြေလေး တစ်ခုလောက် ရွေးထုတ်ပြချင်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါဗျာ။
အရင်တုန်းကတော့ မိန်းမတွေဆိုတာ ယောက်ျားတွေနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ နည်းခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ မိန်းမတွေ အနေနဲ့ ယောက်ျားတွေနည်းတူ စွမ်းဆောင်နေကြတာကိုလည်း တွေ့လာရတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ အမျိုးသမီးတွေကိုယ်စား အစ်မဘာပြောချင်ပါသလဲ။
အစ်မတို့က မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကြည့်ရင် ရိုသေမှုက သက်သက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အများကောင်းကျိုး၊ ကိုယ့်ကောင်းကျိုး လုပ်ဆောင်ကြတဲ့နေရာမှာ ကျတော့ ယောက်ျားမိန်းမခွဲခြားတာထက် လူသားတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ပဲ မြင်တာက ပိုပြီး အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းပေါ့။
၁၀ တန်း စာမေးပွဲဖြေဖို့အသွား ထော်လာဂျီအတိုက်ခံရ တောင်သူဦးကြီး သမီးငယ် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး (Favourite News)
ဒီသတင်းဖတ်မိပြီး တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ကျောင်းဒကာ။ သတင်းကိုဖတ်ကြည့်ဗျာ။
လိုင်စင်မဲ့ထော်လာဂျီယဉ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် မတော်တဆတိုက်မိရာမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုနေသည့် ကျောင်းသူတစ်ဦး ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရမှု မတ် ၁၄ ရက်က ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ကော့မှူးမြို့နယ် ငှက်အော်စမ်းလမ်းအတိုင်း ငှက်အော်စမ်းဘက်မှ ကော့မှူးဘက်သို့ ဇော်ဌေးလှိုင်(ခ) ဇီးကွက် (၂၅) နှစ် (ထော်လာဂျီမောင်း) ကော့မှူးမြို့နယ်နေသူ မောင်းနှင်လာသည့် လိုင်စင်မဲ့ထော်လာဂျီယဉ်သည် ကော့မှူးဘက်မှ ငှက်အော်စမ်းဘက်သို့ ဦးရွှေသန်း (၅၁) နှစ် (တောင်ယာလုပ်) စခန်းကြီးကျေးရွာ ကော့မှူးမြို့နယ်နေသူ စီးနင်းလာသော ကန်ဘို ၁၂၅ မီးခိုးရောင်ဆိုင်ကယ်နှင့် ကော့မှူးမြို့နယ် ညောင်ခြေထောက်လမ်းခွဲအရောက် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ တိုက်မိရာ ဦးရွှေသန်းမှာ ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာအနည်းငယ် ရရှိခဲ့သည်။
ဆိုင်ကယ်နောက်တွင် လိုက်ပါစီးနင်းလာသော သမီးဖြစ်သူ မသူဇာမြင့် (၁၇) နှစ် (ခုံအမှတ်/ဆင-၆၅၂)ဖြင့် အထက (ကော့မှူး)တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်စာပေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုနေသူမှာ နှာခေါင်းသွေးထွက်၊ ၀မ်းဗိုက်ကြမွ၊ စသည့် ဒဏ်ရာများရရှိကာ နေရာတွင်ပင် သေဆုံးသွားရှာသည်။ ထော်လာဂျီမဆင်မခြင်မောင်းနှင်သူ ဇော်ဌေးနိုင်ကို ကော့မှူးရဲစခန်းက (ပ)၃၉/၁၂ ပုဒ်မ ၃၀၄ (က) / ၃၃၈ ဖြင့် အရေးယူထားသည်။
ကဲ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဖြေနေတဲ့ ကလေးမလေးတဲ့ဗျာ။ မိဘတွေ ဘယ်လောက်ရင်နာလိုက်ကြမလဲ။ ဒီလို လိုင်စင်မဲ့ ထော်လာဂျီတွေ ရန်ကုန်နယ်နမိတ်မှာတောင် တွေ့တွေ့နေရတာ အန္တရာယ်များလွန်းတယ်ဆိုတာ ဒီသတင်းလေးနဲ့ သက်သေပြလိုက်ပါပြီဗျာ။
စန္ဒီမြင့်လွင် ပြောတဲ့ မြန်မာ ရပ်ပ်ပါတွေ အကြောင်း (နံနက်ခင်း)
မြန်မာဟစ်ဟော့ပ် လောကမှာတော့ ဒီးဒီ လို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင် ကလည်း ခေသူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပေဘူးဗျ။ အဲဒီ စန္ဒီမြင့်လွင် လေးကို နံနက်ခင်းဂျာနယ်က အင်တာဗျူးထားတာလေး နည်းနည်း ဖတ်ကြည့်ဗျာ။ စန္ဒီမြင့်လွင်လေးရဲ့ ပြောရဲဆိုရဲ ရှိတာလေးကို လေ့လာကြည့်ပါ။
ပြိုင်ဘက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေက သူတို့ကိုယ်တိုင် မြန်မာဟစ်ဟော့ပ်ကို ငေးကြည့်သွားလောက်အောင် ဘယ်လိုပါဖေါမင့် လုပ်ပြမလဲ။
ပါဖေါမင့်တွေက သမီးတို့ဆိုမယ်ဆိုရင် Asia က တခြားနိုင်ငံတွေ ဥပမာ ကိုရီးယားရပ်ပ်၊ တရုတ်ရက်ပ် တို့ကို အေးဆေးယှဉ်လို့ရပါတယ်။ သမီးတို့ဆိုနေတဲ့ မြန်မာရက်ပ်ပါတွေရဲ့ ရက်ပင်းပုံစံတွေက သူတို့ထက်ပိုမြင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က R&B မှာပိုတော်ချင်တော်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Rapping ကျတော့ မကြိုက်တော့ဘူး။ တကယ်မှာ သူတို့ထက်တော်တဲ့သူတွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ သွားပြိုင်လို့ရတဲ့ ရက်ပ်ပါတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဂျေမီ၊ လွှမ်းပိုင် စသည်ဖြင့် ရှိကြပါတယ်။ တကယ်ပြိုင်လို့ ဆုမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တောင် မြန်မာတွေအရမ်းတော်ပါလားလို့ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အဆင့်တော့ ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဂျေမီကတော့ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ကမ္ဘာမှာ ဘယ်အဆင့်ရှိနေလဲဆိုတာမျိုးတော့ တစ်ခါမှ မတွေးမိပါဘူး။ တွေးစရာလည်း မလိုပါဘူးဗျာ။ ကြိုက်ရင်နားထောင်မယ်၊ မကြိုက်ရင် နားမထောင်ဘူးပေါ့။ ရှင်းနေတဲ့ဟာပဲ။ စန္ဒီမြင့်လွင်လေး အင်တာဗျူးဖတ်လိုက်တော့မှ ဂျေမီ အဆင့်က နည်းတဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ ဆက်လုပ် ဂျေမီ၊ ဆက်ပြော စန္ဒီ။
ဂီဂီ ဖတ်ဖို့ သင်ဇာဝင့်ကျော် သတင်းတစ်ပုဒ် (နံနက်ခင်း)
သင်ဇာဝင့်ကျော် အကြောင်း နံနက်ခင်းက ရေးထားတဲ့အထဲက နည်းနည်းလေးဆို နည်းနည်းလေးလောက် ဆွဲထုတ်ပြချင်ပါတယ်ဗျာ။
တလောက ကြားရတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ ချစ်သူဟာ နိုင်ငံခြားဘောလုံးသမားဆိုတာ ဟုတ်လားမေးတဲ့အပေါ် “မဟုတ်ပါဘူး သူငယ်ချင်းပါ” လို့ ပြောပြီး ရယ်နေပါတယ်။
စိုးရိမ်တယ်… ညီမလေးရေ စိုးရိမ်တယ်။
မဟုတ်ရင် ပြီးတာပါပဲ ဗျာ။ နိုင်ငံခြားဘောလုံးသမားဆိုရင်တော့ အော် စိုးရိမ်မိတာ အပြစ်လားဗျာ။
ကြည်လဲ့လဲ့ဦး ကလေး နောက်တစ်ယောက်ရပြန်ပြီ (နံနက်ခင်း)
သရုပ်ဆောင် ဇာနည် ရဲ့ မိန်းမ သရုပ်ဆောင် ကြည်လဲ့လဲ့ဦးတစ်ယောက် မတ်လ ၁ ရက်နေ့က သမီးလေးတစ်ယောက် မွေးလိုက်ပြန်ပါတယ်တဲ့ဗျာ။ သမီးလေးရဲ့ နာမည်ကို ငယ်သွေးဇာနည် ရယ်လို့ ပေးထားပါတယ်တဲ့။ ကြည်လဲ့လဲ့ဦးရဲ့ ပထမကလေးက ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီး မင်းသွေးဇာနည် လို့ အမည်ရပါတယ်။ တီတီစီမှာ သူငယ်တန်းဖြေထားပါတယ်တဲ့။ ဟိုတုန်းက စလင်းဘော်ဒီ ကြည်လဲ့လဲ့ဦး ကြော်ငြာတွေ လာတိုင်း ကြိတ်ကြိတ်ပြီး ခိုက်နေခဲ့ဘူးတဲ့ ကိုနိုဇိုးမိကြီး သိအောင် ပြောပြပေးတာပါဗျာ။
သင်္ကြန်အတွက် အနုပညာရှင်တို့ရဲ့ ပလန်လေးများ (နံနက်ခင်း)
အစ်ကိုကာလသားတွေအကြိုက် ပို့စ်လေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်တတ်တဲ့ မော်ဒယ်ရွှေစင်လေးကတော့ ဒီနှစ်သင်္ကြန် အစီအစဉ်ကတော့ မန္တလေး သို့မဟုတ် ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက်ကမ်းခြေ ပါတဲ့ဗျာ။ အော် သူတို့များကျတော့လည်း အားကျထှာ။
ဒီအချိန်မှာ အရမ်းကြိုးစားချင်နေပါတယ်။ ကြိုးစားခွင့်ရဖို့လည်း စောင့်နေပါတယ်
လို့လည်း ပြောသွားပါတယ်။ ကြိုးစားခွင့်ရဖို့ များ စောင့်နေရသေးလား ရွှေစင်ရယ်။ ကြိုးစားခွင့်ဆီ ပြေးတွေ့လိုက်ပါတော့လား။ ဟေးဟေး။
နည်းနည်းဝလာလို့ ၀ိတ်လျှော့ပါလို့ ပြောသူလည်း ရှိပါတယ်
လို့လည်း ၀န်ခံသွားပါတယ်တဲ့ ခင်ဗျာ။ အော် ဘော်ဒီအလှလေး ပွန်းပဲ့သွားရင် ကိုယ်ရင်ကျိုးရချည်ရဲ့…။
ထွန်းအိန္ဒြာဗိုကြီးကတော့ မန္တလေး အယ်လ်ပိုင်းမဏ္ဍပ်မှာ ရှိပါမယ်တဲ့ ခင်ဗျာ။
သရုပ်ဆောင် နေမင်း ကတော့ ဇာတိ သက္ကလပြန်ပြီး ရိပ်သာဝင် ကုသိုလ်ယူပါမယ်တဲ့။ သာဓုပါဗျာ။
ဒီနှစ် သင်္ကြန် ၅ ရက်လုံး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရန်ကုန်မှာပဲ ရေကစားမယ်။ မဏ္ဍပ်ထိုင်မယ်လို့ ပြောပါတယ်တဲ့။ သင်္ကြန်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်တာပေါ့နော်။ မြန်မာ့ရိုးရာပွဲတော်တွေ အကုန်လုံးထဲမှာ သင်္ကြန်ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ ကဲလို့ရတဲ့အရွယ်မို့ ကဲနေတာပါ လို့ ပြောပြီး ရယ်နေပါတယ်တဲ့ခင်ဗျာ။
ဟိန်းဝေယံကတော့ ဇာတိမော်လမြိုင်မြို့ ဖားအောက်တောရကျောင်း တောင်ထိပ်ရှိ မိသားစုလှူထားသော သိန်း ၁၂၀ ကုန် ဇရပ်မှာ ဖခင်နဲ့အတူ တရားစခန်း ၀င်မှာပါ တဲ့ ခင်ဗျာ။
မန္တလေး အယ်လ်ပိုင်းမဏ္ဍပ်မှာ သီချင်းဆိုပါမယ်တဲ့။
မန္တလေးမြို့တော်ဝန်မဏ္ဍပ်မှာ မြန်မာပြည်သိန်းတန်နဲ့အတူ သီချင်းဆိုပါမယ်တဲ့။
ထုံးစံအတိုင်း ရန်ကုန်ပြည်လမ်းပေါ်မှာပဲ ဆိုကြတီးကြပါမယ်တဲ့ ခင်ဗျာ။
အဆိုတော် မဒီ ရဲ့ ဟမ်းနီးမွန်းခရီး (နံနက်ခင်း)
မိုးလင်းတိုင်းမှာ မရေရာတာတွေ တွေ့အောင်ပြန်ရှာ ဟန်းနီ
ပြီးဆုံးသွားတာ ခုံမင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ တစ်သက်စာ ကိုယ့်လမင်းလေး (ဘယ်မှာ ကိုယ့်လမင်းလေး)
အာ ဘယ်မှာ ကိုယ့်လမင်းလေး (ဘယ်မှာ ကိုယ့်လမင်းလေး)
ဘယ်ကိုနယ်လွန်နေလဲ ပြန်ညရောက်လာရင် တွေ့ရမှ (တို့တွေ့ရမှ… တို့တွေ့ရမှ)
ကျွန်တော် သိတ်ကြိုက်တဲ့ ဘိုဘိုနဲ့ မဒီတို့ ဆိုထားကြတဲ့ စိတ်ကူးလမင်း ဆိုတဲ့သီချင်းလေးပါ ကျောင်းဒကာ။ အင်မတန်အဆိုပိုင်နိုင်သော မိန်းကလေးအဆိုတော်တစ်ယောက် အောင်မြင်နေတုန်းမှာပဲ အမေရိကားကို ရောက်သွားပါတယ်။ မကြားရတာ ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် မဒီ ရဲ့ သတင်းကို အခုကြားရပြန်တော့ မင်္ဂလာရှိသော သတင်းလေးဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ဟန်းနီးမွန်း ထွက်လာတာပါတဲ့။ ၀မ်းသာပါတယ် မဒီရေ။ ခင်ဗျားတို့ အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ခင်ဗျားရဲ့ သီချင်းတွေကိုလွမ်းနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပရိသတ်ကြီးအတွက် သီချင်းတွေဆိုပြပါဦးလို့ ကြိုပြီး တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။
တရားဝင် ကြေညာသွားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးကျောင်းဒကာ။ ဒီတစ်ပတ်ထုတ်နံနက်ခင်းထဲမှာ ပါတဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုကိုဖတ်ပြီး အစဆွဲထုတ်လိုက်တာပါ။ ပထမ အင်တာဗျူးက မခိုင်ကြီး ခေါ် ထွန်းအိန္ဒြာဗို နဲ့ အင်တာဗျူးပါ။ နည်းနည်းဖတ်ကြည့်ပါဗျာ။
တင်ဇာမော်ရောလာဖြစ်လား၊ တလောက မဒီလာသွားတယ်ပြောတယ်။ မခိုင်တို့နဲ့ ရှိုးလုပ်ဖို့စီစဉ်ပြီး ပျက်သွားတယ်လည်း ကြားတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေး ပြောပေးပါဦး။
တင်ဇာမော်က သင်္ကြန်အမီပြန်လာမယ်ပြောပေမယ့် လောလောဆယ် မသေချာသေးဘူး။ အလုပ်နဲ့ဆိုတော့ ခွင့်မရတာလား မသိဘူး။ မဒီပြန်လာတော့လည်း ဆုံဖြစ်ပါတယ်။ ရှိုးလုပ်ဖို့ စီစဉ်ကြသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးကျတော့ သူက ဟန်းနီးမွန်းထွက်လာတာဆိုတော့ stress မပေးချင်တာနဲ့ ရှိုးကို next time လို့ ရွှေ့လိုက်တယ်။
ဒီအင်တာဗျူးဖတ်ပြီး မဒီရဲ့ လက်တွဲဖေါ်က မြန်မာလား၊ နိုင်ငံခြားသားလားဆိုတာလေး သိချင်နေပါတယ်ဗျာ။ ကဲ မဒီကြီးတော့ စွံသွားပြီ။ တို့ရွာသူရွာသားတွေရော မင်းတို့ဘယ်တော့လဲ လို့ မေးရတော့မယ်ဗျာ။
ရက်ပါ အဆိုတော်တွေ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လာတာ ဟစ်ဟော့ပ် လောကအတွက် ဂုဏ်ယူတဲ့ အနဂ္ဂ (ဆန်းဒေး)
ဆန်းဒေးဂျာနယ်မှာပါတဲ့ အနဂ္ဂနဲ့ အင်တာဗျူးလေးပါ။ နည်းနည်း ဖတ်ကြည့်ပေးဗျာ။
ACID အဖွဲ့ဝင် အဆိုတော် ဇေယျာသော်က အခု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်လို သဘောထားလဲ။
သူပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကို တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ သူ ဆက်လုပ်နေတယ်။ အန်တီစုရဲ့ လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာ လှုပ်ရှားဖို့ သူရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် သူက Rapper အဆိုတော်ဖြစ်တော့ ဟစ်ဟော့ပ် လောကအတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါ။
ရက်ပါတွေ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထဲရောက်သွားရင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အကြောင်း ရေးထားတဲ့သီချင်းတွေများ ထွက်လာ မလား စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ ကျောင်းဒကာရယ်။
ဥရောပ သမဂ္ဂ တရားရုံးက ထူးကုမ္ပဏီဥက္ကဌ ဦးတေဇ၏သား ကိုပြည့်ဖြိုးတေဇကို ပိတ်ဆို့အရေးယူ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် (NEWSWEEK)
ဦးတေဇ၏ သားကြီး ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်း၏ ဥက္ကဌ ကိုပြည့်ဖြိုးတေဇကို ဥရောပသမဂ္ဂ ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူသူများစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန် ဥရောပသမဂ္ဂ၏အမြင့်ဆုံးတရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ကိုပြည့်ဖြိုးတေဇ ကုန်ကျထားသည့် တရားရုံးစရိတ်များကို EU ကောင်စီမှ ပေးဆောင်စေရန် အမိန့်ချခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကိုပြည့်ဖြိုးတေဇသည် EU အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများတွင် ပညာသင်ကြားခွင့်၊ ခရီးသွားလာခွင့်၊ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခွင့်များ ရရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။
၀င်မပွားတော့ဘူးဗျာ။ အနေအထိုင်အပြောအဆိုလေး ဆင်ခြင်မှ တော်မယ်ဗျို့။ သတင်းဖတ်သူတွေပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပွားကြပါ။
ကဲ ဒီတစ်ပတ်တော့ ရေးမယ်ဆို ရေးစရာ နိုင်ငံရေးသတင်းတွေက မနည်းလှပါဘူးဗျာ။
ဒါပေမယ့် အရှုပ်ထဲမှာ ရှင်းအောင်နေဆိုသလိုပဲ နိုင်ငံရေးကို လုံးဝနီးပါးကြီးရှောင်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာပါတဲ့ ကျွန်တော့်အရေးအသားတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်မှာ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာများ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် မည်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါ လို့သာ ကြိုတင်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Kalyar Stitch says:
@အထင်လွှဲမှားနေကြသော သူငယ်ချင်းများနှင့် အစ်ကို အစ်မများ
ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်မဟုတ်တဲ့အတွက် အခက်ခဲနဲ့ကြုံတဲ့အခါ သူများတွေထက်ပိုပြီးစိတ်ညစ်ရတာကို ပြောချင်တာပါ။ ပရိုဂရမ်မာအလုပ်ကိုပြောတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်မှာခဏခဏစိတ်ဓာတ်ကျလို့ Leader နဲ့ Manager က အကြိမ်ကြိမ် အားပေးခဲ့ကြတာပါ။ အဲ၂နှစ်အတွင်းမှာ ရခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အစ်ကို အစ်မတွေက ဘာနဲ့မှ အစားထိုးလို့ မရနိုင်အောင် တန်ဖိုးကြီးပါတယ်။ errorတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တိုင်း ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်မှု့ကလည်း ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပါဘူး။ ပရိုဂရမ်မာဘ၀ကို တကယ်ချစ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက (၆တန်း ၇တန်းလောက်ကတည်းက)မက်ခဲ့တဲ့ ဘ၀ရည်မှန်းချက်အိပ်မက်စိတ်ကူးသာ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ခုချိန်မှာ ပရိုဂရမ်မာဘ၀နဲ့ပဲ ရှိနေအုံးမှာပါ။ ငရဲကျတယ်ဆိုတာက ပမာပေးပြီးခိုင်းနှိုင်းတာလွန်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ ဗိုက်မဆာဘဲ ဗိုက်ပြည့်ရုံသက်သက်စားတဲ့စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေထက် ဗိုက်ဆာပြီးမှစားတဲ့ ထမင်းကပိုပြီး စားမိန်တဲ့လို့ မြန်မာစကားမှာရှိပါတယ်။ အဲသဘောမျိုးပြောချင်တာပါ။ ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေက အားလုံးကို ထိခိုက်နှစ်နာစေတယ်ဆိုရင် စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ် တောင်းပန်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။ အားလုံးနဲ့အတူ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိနေပါတယ်။ ပြောလိုက်တဲ့စကားက အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှု့လွှဲမှားကုန်တာကို တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပါ။ နောင်ဆိုရင် စကားပြောဆင်ခြင်ပါ့မယ်။ အားလုံးကို တကယ်ပဲ အနူးအညွှန့်တောင်းပန်ပါတယ်။
စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ တောင်းပန်တာကိုလက်ခံပေးကြပါ။ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ ထပ်ခါတလဲလဲ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ တကယ်ချစ်တဲ့ချစ်သူနဲ့ ကွေကွင်းရတဲ့ သောကလိုမျိုး တကယ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ဘ၀ရည်မှန်းချက်နဲ့ကွေကွင်းရတဲ့သောကကို ကျောင်းပြန်တက်ရတဲ့အချိန်2နှစ် နဲ့ အလုပ်လုပ်ချိန်2နှစ် – 4နှစ်လောက်ခံစားခဲ့ရတာပါ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်ခွင့်မရလို့ ညတိုင်းအိပ်မပျော်ဘဲ ငိုခဲ့ရတာပါ။ ငါ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမဖြစ်နိုင်တော့ပါလားလို့ အကြိမ်ကြိမ်တွေးမိရင်း ရင်ထဲက မျက်ရည်ကျခဲ့ရတာပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေရခဲ့တာပါ။ အဲရဲ့ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါကို ခုထိခံစားနေရတုန်းပါပဲ။ အတွေးတွေရဲ့နှိပ်စက်မှု့ဒဏ်နဲ့အိပ်မပျော်တော့တာပါ။ အဲလိုခံစားခဲ့ရတာကို ငရဲကြတယ်လို့ပြောချင်တာပါ။ လူတိုင်း ကိုယ်လိုချင်တာမရလို့ စိတ်ညစ်ဖူးတဲ့အချိန်တော့ ရှိကြမှာပါပဲ။ အဲလိုအချိန်က ငရဲကျချိန်လိုပဲမဟုတ်ဘူးလားဟင်။ အဲလိုခံစားမှု့မျိုးကိုပြောချင်တာပါ။ နားလည်ပေးကြပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်….. ဘယ်အလုပ်ကိုမှ ထိခိုက်နှစ်နာစေလိုတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့ပြောခဲ့မိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီထဲမှာရှိတဲ့ သူတွေအားလုံးက ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို အကောင်ထည်ဖော်နေကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးငရဲကျတယ်လို့ ခံစားရပါ့မလဲ။ ကိုယ်အရမ်းလုပ်ချင်တာကို တားမြစ်ခံရပြီး အခြားအလုပ်တစ်ခုကိုသာ ဘ၀ရပ်တည်ဖို့ လုပ်ရမယ်ဆိုရင် ငါ ဘယ်လိုခံစားရမလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကိုဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရရင် အနည်းနဲ့အများတော့ စိတ်ညစ်ကြရတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါကဖြစ်သင့်တာပဲလို့ စိတ်ကိုဖြေသိမ့်ပေမဲ့ ဖြစ်ချင်တာကိုမဖြစ်ရလို့ စိတ်တော့ကသိကအောင့်ဖြစ်မိကြမှာပါ။ အထင်မှားအောင် ပြောမိတဲ့အတွက် အားလုံးပဲ ခွင့်လွှတ်ပေးကြဖို့ စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ ထပ်ခါထပ်ခါ တောင်းပန်တာပါ။ အားလုံးကို အထင်အမြင်ရှင်းစေချင်ပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်။ စိတ်ထဲမှာလဲ မထားကြပါနဲ့တော့နော်။ တောင်းပန်ပါတယ်နော်။ ခွင့်လွှတ်တယ်လို့ပြောပေးကြပါနော်။ အထင်မှားနေကြတဲ့အတွက် တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိလို့ပါ။ တကယ်ကိုစိတ်ရင်းမှန် နဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။
ကျနော်တို့ ချဉ်းကပ်နည်း တခု လိုတယ်ဗျ…
သည်လိုပါ… သည် ချိုပေါ့ကျ စီးရီးစ် အကြောင်း..
စာရေးသူ ကိုဘလက်အကြောင်း …
နှာစေးတတ်တဲ့ သဂျီး (အယ်ချုပ်အကြောင်း)
ဒီရွာကြီးအကြောင်း .. ရွာသူားတွေ အကြောင်း လေး အရင်
သည်ရွာက ဒီမိုကရေစီ ရထားတယ်ဗျာ..
လွတ်လပ်စွာ အမြင်ကွဲလွဲခွင့်ရှိရဲ့ …မတူတဲ့အတွေးအမြင်တွေ
စိတ်ကြိုက်ပြောခွင့်ရှိရဲ့ … (စည်းကမ်းနဲ့ ဘောင်အတွင်းကပေါ့…)
ဒါ ဒီမို သဂျီးရဲ့ ပေါ်လစီ …
နောက်တခု စာရေးသူ ကိုဘလက် အကြောင်း…
(ကျနော်ကတော့ နောက်ပြီး ဘဘဘလက်လို့ ခေါ်လေရဲ့)
ဘဘဘလက်က စာကောင်းပေကောင်းလေးတွေ … သတင်း အထူးအဆန်းလေးတွေ
တခါတခါ ကဗျာနဲ့ သီချင်းတွေ ..ရာသီစာလေးတွေ …စုပြီး တင်ပေးတတ်တယ်ဗျ..
သည် ချို-ပေါ့-ကျ စီးရီးစ် ကိုကြည့်ရင်ပဲ သိနိုင်မယ်ထင်ရဲ့ဗျာ…
local hot news လေးတွေပဲ pick-up လုပ်ပြီး တင်ထားခဲ့တာ …
သတင်းတွေ ဖတ်ဖြစ်တဲ့လူတွေက မတူတဲ့အမြင်နဲ့ ဆွေးနွေး..
မဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဝေးရောက်တွေအနေနဲ့ က ဘူဖေး စားသလို
အထိုင်တည်းနဲ့ အစုံရ .. အတည်ဆွေးနွေးတာတွေ .. စနောက်တာတွေ…
ငြင်းခုန်တာတွေ ..စာရေးသူနဲ့ စာဖတ်သူကြား စာဖတ်သူအချင်းချင်း
communication လုပ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ ….
သည်ပိုစ့်မှ မဟုတ်ဘဲ တခြား ပိုစ့်တွေ ဖတ်ကြည့်ရင် ရွာရဲ့ သည်သဘောလေးကို
ဆိုလိုရင်းက ခုမှ စပြီ နော..
မင်းသမီး သည်လိုပြောခဲ့တဲ့ ကိစ္စဟာ ကျနော်တို့ ဘေးလူ (ရွာသူားတွေ)
အတွက်တော့ ဖြတ်သန်းသွားခဲ့တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် သက်သက်ပဲ ဆိုတာပါ…
သည်သတင်း ဖတ်မိတဲ့ လူတွေထဲမှာ လက်ခုတ်တီး အားပေးတဲ့လူရှိမယ်..
မထူးဆန်းသလို ခံစားတဲ့လူရှိမယ်.. ရှုံ့ချတဲ့လူ ရှိမယ်….ပမာဏသာကွာသွားမယ်…ပေါ့ဗျာ..
ဆိုတော့ ကျနော် အထက်မှာပြောထားသလိုပဲ .. သည်အပြောလေးတစ်ခုကိုတော့ဖြင့်..
မနှစ်သက်လို့ မနှစ်သက်ဘူး ပြောခဲ့ယုံဗျာ …(တောင်းပန်စရာ မလိုဘူးရယ်လေ..)
ဒါ ပြောခွင့်ရှိတယ်လေဗျာ ..ဒေ၀ီဆူးခက် ရဲ့ အခွင့်အရေးပါ ..ပြောခွင့်ရှိပါတယ်..
ကြိုက်တာမကြိုက်တာလည်း ကျနော်တို့ အခွင့်အရေးပါ..
တောင်းပန်စရာ မလိုပါဘူး …ဆိုတာရဲ့ ဒုတိယ အကြောင်းပြချက်က ..
ကျနော်တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလို့ မေ့သလောက်တောင် ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းကိစ္စတရပ်ရယ်ဗျ..
(ချို-ပေါ့-ကျ စီးရီးစ်လည်း အမှတ်စဉ် ၈ရောက်လို့ ၉ တောင်စောင့်နေကြပြီ)
ခုတလောလည်း တခြားဟာထက် ..တိုင်းရင်းသားရေး ကိစ္စတခု အားလုံးအာရုံကျနေကြလေရဲ့..
ကျုပ်တို့ …စိတ်ဆိုးတာတွေ မုန်းတာတွေ ညှိုးတာတွေ မရှိကြပါဘူးဗျာ ..
အမြင်မတူတာ ကို လက်ခံယုံ … ကိုယ့်ရဲ့ မတူတဲ့ အမြင်ကို ထုတ်ဖော်ရုံ
သက်သက်လောက် ရယ်… သည်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့တော့လို့
နောက်တချက်က ကျုပ်တို့အားလုံးက စာရေးရတာကို သိပ် နှစ်သက်ပြီး
အနုပညာကို သိပ်ချစ်ကြတယ်ဗျ …. အပေါ်မှာလည်း ပြောထားပါသေးတယ်..
ပိုက်ဆံရှိရင် ပလိုဂလမ်မာ အစ ဆြာဝန် အင်ဂျင်နီယာအလယ် စစ်သား အဆုံး
နိုင်ငံခြားက ၀ယ်လို့ရရဲ့ဗျာ… ကိုယ့်လူမျိုးအနုပညာသည် ကိုတော့ ဘယ်နိုင်ငံကမှ ၀ယ်မရတာမို့…
ကိုယ့် ပရို လိုင်းမှာ ၁ယောက်လျော့ပေမယ့် ကိုယ့်လူမျိုး အနုပညာရှင်တယောက် တိုးမယ့်ကိစ္စ ကို
ပျော်ပျော်ကြီး လက်ခုပ်တီး အားပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းရယ်ပါ…..
နောက်ဆုံးကတော့ ပါဆင်နယ် ပိုင်းပါ …
ညီမ သိပါတယ်… လမ်းကြောင်းတခုပေါ် ရောက်ပြီးမှ ..အဲ့သည့်လမ်းကြောင်းမှာ ရှေ့ကို မြင်ရပြီးမှ
ပြောရရင် အနေအထားကောင်းတခုရောက်ပြီးမှ … မိမိဝါသနာပါရာ လမ်းကြောင်းသစ်ကို ပြောင်းလဲ
ပစ်လိုက်တဲ့ သတ္တိရှိ တဲ့ လုပ်ရပ်ကို လုပ်သွားတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ မြင်တာပဲလေ..
၂၀၁၂ ၄လပိုင်း ရှိပြီနော … ညီမသာ ဆက်လုပ်နေမယ်ဆို သည်နေ့ သည်အချိန် ဘယ်လောက်နေရာ
ရောက်မယ်ဆိုတာလည်း .. ကျနော် တွက်မိသေးရဲ့…
ကိုထူးဆန်း ပြောသွားသလို ပိုစ့်ပိုင်ရှင် ခရီးထွက်နေတယ်ဗျ…
သဂျီး နှာစေးလို့ ..စောင်ခြုံကွေးနေတယ်..
စာရေးသူအများစုလည်း သင်္ကြန် ပိတ်ရက်မို့ ..သိတဲ့အတိုင်း..
စကားမစပ် ..social media ပေါ်မှာ active ဖြစ်တာလေးတော့ ချီးကျူးတယ်ဗျို့…
brand communication တွေ အများကြီးလုပ်လို့ရတဲ့နေရာမို့ပါ..
ရွာထဲလည်း မကြာမကြာ အလည်လာပါဦးဗျ…
ပိုစ်ပိုင်ရှင် ဦးဘလက်က ပုဂံသွာမယ်ပြောထားလို့ မတွေ့သေးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ တွေ့ရင် သေခြာပေါက် ခွင့်လွှတ်မှာပါ ။ ခွင့် မ လွှတ်စရာ အကြောင်းမှ မရှိတာ။
ဂိ (ဖားသက်ပြင်း) တို့က တော့ ပိုစ်အဟောင်းဖြစ်နေလို့ မဖတ်မိကြတော့လို့ မရေးကြတာဖြစ်မှာပါ ။
Kalyar Stitch ရေ ပိုစ်တစ်ခု တင်လိုက်ပါလား ..ဒါဆိုအားလုံးလဲမြင်ပြီး ..
အမလေး စကြနောက်ကြနဲ့ ပျော်စရာလည်း ကောင်းသလို နားပူမဲ့ သူတွေလည်း ရှိတယ်နော့် … :grin:
ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရတဲ့ ဂေဇက်ကိုတကယ်ပဲ ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။
ခုလိုပြောကြလုိ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုကိုယ်ပြန်မြင်ရတာပေါ့။ စကားပြောခြင်းအတတ်ပညာလိုအပ်နေသေး တယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကို ပိုပြီးသိလိုက်ရတယ်လေ။ ရင်ထဲကပြောချင်တာကို ထိရောက်မှု့ရှိအောင်မပြောနိုင်ဘဲ အထင်မှားစေခဲ့မှု့အပြောသက်သက်မို့ တောင်းပန်တာပါ။ မဟုတ်ရင် တောင်းပန်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးကို ခင်ချင်ပါတယ်။
စာအုပ်ဟောင်းပြန်လှန်ဖတ်ရင်း ချိုပေါ့ကျ ပြန်လွမ်းသွားတယ်။